रजतपटले चरित्रहत्या गरेको भन्दै गरिमा शर्मा रुँदै आइन् लाइभ !
२०७८ असार २५ गते शुक्रबार नजिक न्युज संवाददाता
भ्रामक समाचार प्रशारण गरेर आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै उनी हिजो राति टिकटकमा रुँदै लाइभ आइन् । उनले रजतपट कार्यक्रम र प्रस्तोताविरुद्ध कानूनी कारवाहीमा जाने चेतावनी पनि दिएकी छन् ।
अभिनेत्री जेनी कुँवर मृत फेला
उनी सनराइज सिटीको अपार्टमेन्टमा बस्दै आएकी थिइन्। निर्मात्रीसमेत रहेकी उनले ‘जिन्दगानी, मैदान, जीवनदाता, कानुन, अभिमन्यु, विन्तिपत्र, मलाई माफ गरिदेऊ लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन्।
हिलोमा रोमान्स गरेको भन्दै भाइरल भएको फोटोका युवायुवती को हुन् ?
धान दिवस मनाइयो। धान दिवसमा किसाहरुले रोपाइँ गर्दै दहीच्यूरा खाएरै मनाए। तर, देशैभर धान दिवस मनाइरहदा एउटा फरक दृश्य देखियो। उक्त दृश्य खुबै भाइरल भयो। तर, ती युवायुवती को हुन् ? किन यस्तो गरे ? यो भने चासोको बिषय बनेको छ। कोही कोहीले त पूर्व मन्त्री हरी पराजुलीसँग पनि उक्त घटनालाई जोडे। यस्तो छ उक्त घटनाको वास्तविकता।
अन्य सामान्य लघु फिल्म र विज्ञापनमा अभिनय गरे पनि मूलधारको चलचित्रमा भने कर्माले पहिलो पटक अवसर पाएका हुन् । विगतका केही चलचित्रमा सामान्य भूमिका निर्वाह गरे पनि पछिल्लो भूमिकाले भने चिनियाँ बाहेकका कलाकारको हौसला पनि बढाएको छ ।
२०७८ जेठ २९ गते शनिबार रासस
कक्षा १ देखि ७ र कक्षा ९ को नतिजा सम्बन्धित विद्यालयले प्रकाशित गर्ने छन् भने कक्षा ८ को नतिजा नगरपालिकाले प्रमाणित गरेपछि मात्र प्रकाशन हुनेछ। गत वर्षसमेत कोरोना महामारीकै कारण आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो।
२०७८ जेठ २४ गते सोमबार एजेन्सी
उनले आफू यो फिल्मका लागि उत्साहित रहेको बताउँदै फिल्मको सेटमा फर्कन आतुर रहेको बताएकी छिन् । फिल्मको विषय विवाहकै पृष्ठभूमिसंग जोडिएको छ ।
विक्की र कट्रिनाको पछिल्लो समय एकसाथ समय बितादै आएका छन् । लकडाउनकै समयमा पनि दुवै एकसाथ संक्रमित भएको र एकसाथ निको भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
उनले आफ्नो बोल्ड लुक्सका लागि रातो र कालो कपडा रोजेकी छन्। हरियो कपाल बनाएकी रिहानाले ज्याकेट, स्विटर र स्कार्फ लगाएर पनि फोटो सुट गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय हुने रिहानाले ती फोटो स्टाग्राममा पनि सेयर गरेकी छन्।
कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण चलचित्रकर्मीहरू घरभित्रै बसिरहेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि केही बलिउडकर्मीले भने चर्चा बटुल्दै आएका छन्। तिनैमध्येकी एक हुन्, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला।
नीलो रङको कपडा लगाएर सूर्यास्तको मज्जा लिएकी थिइन्। लकडाउनको समयमा उनले आफूलाई घरभित्र पनि निकै व्यस्त राख्दै आइरहेकी छन्। खानाका विभिन्न परिकार बनाउनेदेखि सिलाइबुनाइका काममा पनि उक्तिकै सक्रिय रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ।
आँखा झिम्क्याएको ईमोजी पेटमा बनाएर उनले आगन्तुक सन्तानलाई जुस खुवाउदै छिन् । तस्विरमा उनी आफू पनि खुशी देखिएकी छन् । सन्तान आगमन हुँदै गर्दा एउटा आमा खुशी हुनु त नौलो कुरा भएन ।
२०७८ जेठ १२ गते बुधबार नजिक न्युज संवाददाता
उहाँले मृगौला फेल भएपनि सफलताका साथ स्कुल चलाउनुभएको थियो । केपी ओली एकपटक तिमीले चलाएको देश र मेरो बुबाले चलाएको स्कुल हेर । तिमी त भेडाहरुलाई पछाडि हुल लगाएर हिडेका छौं । भारतको विरोध गरेर चुनाव जित्यौं । तिमी राम्रो नेता होइन केपी ओली ।’
आफ्ना श्रीमान् निकसँग रोमान्टिक अवतारमा देखिएकी छिन् । केही समय लण्डनमा बिताएपछि प्रियंका र निक अमेरिका फर्किएका छन् । उनीहरु, हालैमात्र बिलबोर्ड्स म्यूजिक अवार्डमा सहभागी भए ।
२०७८ जेठ ०८ गते शनिबार नजिक न्युज संवाददाता
तर, आफ्नो चरित्रबारे उनले खुलाएकी छैनन् । महिला प्रहरी अधिकारीको भूमिका के हुन्छ, त्योबारे आफूले बताउनु नपर्ने उनको कथन छ । चलचित्रलाई मुम्बईको एक पुलिस स्टेसनमा पनि केही दिन छायांकन गरिएको थियो ।
सुरक्षाको चित्त दुखाइ
कार्यक्रमको समापनमा निफका अध्यक्ष केपी पाठकले कार्यक्रमको सफल पार्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए। पाठकले पुरस्कार विजेतालाई बधाई दिँदै कोरोना महामारी शान्त भएपछि कार्यक्रम आयोजना गरी विजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरिने जानकारी दिए।
कोरोनाको यो दोस्रो लहरमा पनि करिब दर्जन हाराहारीमा कलाकर्मी सङ्क्रमित भएका छन् । तीमध्ये कतिपयले यसलाई पराजित गरिसकेका छन् भने केही अझै लडिरहेका छन् ।